Sidee Youtube Lacag Looga Sameeya? (5 dariiq Oo muhim ah) – Brandkii
Dad badan aya is waydiinaya shirkada Youtube ee mudada badan hawada ku jirta loona isticmalo muqaalada sida heesaha, ciyaaraha, aflaamta, muxadaroyinka iyo waxyabo kale oo laa mida ah looga helo faa’iido, dad badan aya yago ku wareersan su’aashan u qatay in aysan jirin wax faa’ida ah uu leyahay shirkadan youtube ee muqalada qabilsan .
Hadaba jawabta saxda aya waxay tahay Youtube aya ah meel Loogu tala galay muqalada nooc walbay yihin ayaa ah hooy qofku uu ka bilaawi karo lacag sameyn. waxa shirkadan la aasasay sanadka markuu haa 2005 yadoo u jeedadeedu tahay in laga helo muqalada aduunka oo odhan ayaa ay shirkada google la waregtay sanadku markuu ha 2006. Shirkadan google oo lahayd adeeg yo badan oo u ka midyahay adeeyga canka ah ee lo yaqaan GOOGLE ADSENSE ayaa waxay google u fududeysay isticmalayasha youtube inay Xisabtoda kusoo dari kara GOOGLE ADSENSE oo micnaheedu tahay xayaysii lagu helo lacag .
Sideed uga heli karta lacag muqaal ad soo galisay youtube?
waa inad ku lahaata xisaab shirkada google oo ku shaqeysa youtube.
wa inaad sameeysa muqaal ku khaas ah adiga oonad kasoo qadan ama kasoo xadin muqaalo kale oo horey loo soo galiyey youtube.
wa inad furataa xisaab sidoo kale GOOGLE ADSENSE
wa inaad ka mid noqota YOUTUBE PARTENER.
Sido kale wa in uu muqaal kaadu helaa daawasho badan (viewers) si ad ugu heshid lacag fiican.
Hadaba qoraal kan midka ku xiga ayan ku sharixi doonaa isago sawir wata qaabkaad u sameeysan laheyd YOUTUBE, GOOGLE ADSENSE , IYO YOUTUBE PARTENER.